Hagaha Socdaalka Udon Thani Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Udon Thani waa magaalo ku taal gobolka Isaan ee Thailand. Badanaa waxaa loo yaqaan si fudud Udoon or Udorn (อุดร), Magaalada yaan lagu jahwareerin Ubon - Ubon Ratchathani koonfurta-bari ee Isaan.
Hordhaca Udon Thani
Waxaa aasaasay 1890s-kii Prince Prajak Silapakom, Udon Thani waa magaalada 7-aad ee ugu weyn Thailand.
Udon wuxuu lahaa saldhig diyaaradeed oo ay leedahay USAF intii lagu jiray Dagaalkii Fiyatnaam kaas oo kordhiyay hantidiisa iyo muhiimadiisa. Waxaa ku hareereysan mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee beeraha dalka, Udon Thani waxay noqotay xarun goboleed ee beeraha, qeybinta ganacsiga, dukaamaysiga iyo warshadaha dalxiiska ee curdinka ah.
Joogitaanka Mareykanka awgiis (saldhigga hawada illaa 1976, qunsuliyadda Mareykanka illaa 1995, iyo hadda, idaacadda codka Mareykanka) qaar badan oo reer Thais ah ayaa mushaar fiican qaatay oo bartay Ingiriisiga, taasoo ka dhigaysa inay ka sii suuq geyn karaan shaqaalaha ajaanibta qorta. Udon waxay leedahay tiro badan oo muwaadiniinteeda ah oo ka shaqeeyay ama ka shaqeynayay dibedda, gaar ahaan goobaha saliidda ee Bariga Dhexe. Tani waxay wax ku biirisay hodantinimada aagga iyo sida ay ugu habboontahay inay ahaato meel loo dhoofo. In kabadan 5,000 oo ajaanib ah oo ka yimid Yurub, Australia iyo Waqooyiga Ameerika ayaa degay aagga.
Gal Udon Thani
U duuli Udon Thani
Madaarka Udon Thani. Waxay leedahay duulimaadyo dhowr 50 ah maalin kasta Bangkok (Suvarnabhumi [BKK]) (Thai Airlines: ilaa 2,500 Thai Baht) ama (Don Mueang [DMK]) (Air Asia oo ka socota 500 Thai Baht iyo Nok Air oo ka socota 1,250 Thai Baht haddii si fiican loo sii ballansaday). Waxaa sidoo kale jira duulimaadyo toos ah oo taga Chiang Mai, Loei iyo Phuket (Air Asia waxay u duushaa Phuket iyadoo tikidhada badanaa ku dhowaad 1,000-1,200 Thai Baht, taas oo u dhiganta safarka baska / tareenka 2-habeen Bangkok).
Si aad u timaaddo magaalada waxaa jira adeeg limousine ah (dhab ahaantii bas yar) oo loogu talagalay 80 Thai baht / qof ah oo kugu ridi doona adiga iyo rakaabka kale meesha aad dooratay. Tigidhada basaska yar yar waxaa laga heli karaa qolka midigta midig markaad ka baxeyso dhismaha terminalka. Haddii ay jiraan in ka badan labadiinii, way ka raqiisan tahay inaad u wacdo taksi (Tel. +66 42 323239) ama adeegsiga adeegga loo yaqaan 'Grab ride-hailing service', oo (laga bilaabo Janaayo 2019) ku kacaya 160 Thai baht illaa iyo bartamaha Udon . Tagaasida looma ogola inay ku sugaan rakaabka garoonka diyaaradaha, laakiin qaarbaa sidaas sameeya, iyagoo weydiisanaya 200-400 Thai Baht safarka 4 km ah. Huteelada qaarkood waxay leeyihiin adeegyo qaadis waxayna qaadan karaan rakaab dheeri ah ama labo haddii boosku saamaxo. Qaar ka mid ah basaska dhaadheer ee tagaya Khon Kaen ayaa lagu arkay garoonka diyaaradaha, iyadoo ay la socdaan dad aad u tiro badan. Looma arag agagaarka garoonka diyaaradaha Udon Thani songthaews.
Hadaad u safreyso Nong Khai, waxaa jira xafiis toos kuu hortaagan markii aad timaado hoolka imaatinka ee lagu iibiyo tikidhada yar yar Nong Khai. Waxay leeyihiin bas yar oo kulmaya inta badan duulimaadyada iyo 200 Thai Baht waxay kugu rari doonaan bas yar. Waxay qaadataa hal saac in la gaaro Nong Khai oo haddii aad darawalka weydiisato wuxuu kuu kaxayn doonaa hudheelkaaga, ama wuxuu kaa dejin doonaa dhinaca Thai ee Buundada Saaxiibtinimada. Ka dib waxaad u sii gudbi kartaa Laos.
Bas ahaan ku taga Udon Thani
Magaalada waxaa ku yaal afar saldhig oo basaska laga raaco:
Xarunta basaska ee Xarunta Magaalada, Saldhig 1 (Saldhigga BKS). Saldhigga weyn ee basaska magaalada wuxuu ku dhow yahay Central Plaza.
Istaanka Basaska 2 (Saldhigga Basaska Waqooyiga) (Duleedka galbeed ee magaalada wadada ka baxda Loei ilaa Nong Khai). Basaska tagaya ama ka imanaya waqooyiga Thailand sida Loei, Chiang Mai, Chiang Rai. Tuk-tuk magaalada ayaa ku kacaya qiyaastii 100 Thai Baht halkaas (Diseembar 2014). Songthaew 7 ayaa ku geyn doona sidoo kale.
Istaanka Basaska 3 (Meel ka baxsan wadada giraanta, dhanka woqooyi ee magaalada). Basaska fasalka saddexaad u socda Nong Khai. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Nakhonchai Terminalka Baska Hawada Udon Thani (Wadada Tahan oo ka soo horjeedda Isbitaalka Xoogga). Fasalka koowaad iyo VIP maalinti iyo basaska habeenka la tago Bangkok. Nakhonchai Air waxay sumcad sare ku leedahay tayada, iyo maaraynta wadayaasheeda inay si nabad galyo ah u wadaan. Basaska ka imanaya Bangkok sidoo kale joogso Basaska 1 markii aad timaaddo Udon Thani, ka hor intaadan ku joogsan terminaalkooda. Nakhonchai Air waxay leedahay basas tagaya Bangkok saacadda 08:50; 09:40; 19:00; 20:50; 21:25; 22:00; iyo 22:45. Waqtiga safarku wuxuu ku saabsan yahay 7-9 saacadood waxay kuxirantahay taraafikada. Joogto ah, 454 Thai Baht; VIP, 606 Thai Baht. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Bangkok. Basaska ka imanaya Bangkok (Mo Chit), socdaal 8 saacadood ah, wuxuu ku yimaadaa saldhigga BKS ee ku yaal Bartamaha Magaalada. Basaska BKS ee taga Mo Chit waxay baxaan 20:00; 20:30; 21:00; iyo 21:20. Nakhonchai Air sidoo kale waxay basas u raacdaa Bangkok. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Chiang Mai. Kursiga VIP-da ee baska (tusaale ahaan, Chackrapong Tour) qiimihiisu waa 666 Thai baht. (Diseembar 2014). Safarka habeenki wuxuu qaadaa 10.5 hr. Tani waa inay noqotaa mid kamid ah safaradii basaska ugu xumaa ee Thailand maadaama waddooyinka loo maro ay yihiin kuwo yar, miyi, iyo wareegid. Kuwa dusha sare ku yaal basaska laba-geesoodka ah ayaa laga yaabaa inay ka helaan dhammaanba safafka-iyo-soo-baxa. Sidoo kale, maaddaama barta dhexe ay tahay mid ka mid ah meelaha fog fog ee Thailand, baskaagu ma sameyn karo caadada 20 min. jebi jidka dhexe, ama jebin kasta haba yaraatee. Basaska Chackrapong ee taga Udon waxay kugu ridayaan boosteejada Basaska fog 2, sabab looga fogaado hadaad awoodid adoo qaadanaya Phetprasert. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Phetprasert waxay leedahay saddex bas maalintii Chiang Mai ilaa Udon (iyo xagga Nakhon Phanom). Way baxaan Chiang Mai markay tahay 14:30, 17:30, iyo 19:30, waxay yimaadeen Udon markay ahayd 02:15, 05:15 iyo 05:30 siday u kala horreeyaan. Qiimaha (Abr 2015) waa 636 Thai Baht. Phetprasert wuxuu rakaabka ka daadiyaa Central Plaza Shopping Mall, oo ah meel aad ugu wanaagsan Xarunta (Mar 2015). Basaska si Chiang Mai ka bax xarunta dukaamaysiga 17:45, 18:45, iyo 20:45. Ka iibso tikidhada Phetprasert saldhigga baska ee Xarunta Magaalada, socod 5 daqiiqo ah oo laga soo galo xarunta dukaamaysiga.}}
Udon-Khon Kaen. Basaska qaboojiyaha leh iyo basaska yaryar waxay ka baxaan Udon's Bus Station 1 ee magaalada hoose. Waxaa jira ugu yaraan laba bixitaan saacaddii. Muddada safarku waa qiyaastii 90 min wadada 125 km. Sida xaruntii hore ee "hawo-qaboojiye la'aan" magaalada hoose Khon Kaen wuu xidhan yahay hada, basku wuxuu toos u aadayaa Terminalka 3 lix kilomitir koonfur ka xiga magaalada. Basku wuxuu mari doonaa bartamaha magaalada, wuuna joogsan doonaa dhowr jeer si uu dadka udajiyo, marka caqli bay noqon kartaa inaad daawato khariidada oo aad ka degto goobta kuugu dhow hoteelkaaga, ka dib raac tuk-tuk ama Grab halkaas. 80 Thai Baht. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Nong Khai. Basaska ka socda dhowr shirkadood ayaa taga ugu yaraan hal saac saacaddii wixii ka dambeeya 08:00 illaa Nong Khai, 1 saac, hawo qaboojiyaha ha ahaado 3aad) xadka Lao. Basaska ka imanaya Nong Khai laga yaabaa inuu kaa tuuro waqooyiga magaalada. Raac dadka deegaanka oo ku bood sugitaanka # 6 songthaew boosteejada baska ama raac tuk-tuk. 50 Thai Baht (Oktoobar 2013). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Pattaya. Shirkadda Basaska ee 407 waxay leedahay maalin walba 08:00, 18:30, iyo 20:55 basas oo taga Pattaya. Baska subaxu wuxuu qaataa ilaa 12 saacadood maadaama basku istaago meelo badan. Basaska habeenkii waxay qaataan qiyaastii 10 saac. Qiimaha waa 636 Thai Baht VIP (Noofambar 2015). Shirkadda 407 waxay leedahay meel u dhow xafiiskeeda/baska baska, laakiin kuma taal boosteejada baska ee Xarunta Magaalada. Waxay ku taal geeska waddada weyn ee ka soo hor jeeda boosteejada basaska oo u dhow 7-Eleven. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Points bari. Basasku waxay aadayaan qiyaastii hal saac saacaddii Sakon Nakhon (100 Thai Baht, 3 saacadood, hawo leh, 160 km u jirta Udon Thani, wadada loo maro Nakhon Phanom iyo Mukdahan). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon-Vientiane. Waxaa jira lix bas oo xawli ah maalintiiba si toos ah Suuqa Subixa ee Vientiane (80 Thai Baht, 2 saacadood, duulimaadyada fasalka 1-aad ee 08: 00, 10: 30, 11: 30, 14: 00, 16: 00, 18) : 00) Shirkadaha qaar ma iibin doonaan safarkan haddii aadan tusi karin fiiso. Basaskan xuduudaha ka gudbaya ayaa mararka qaar qaadi doona rakaab aan horay u helin fiisooyinkooda Lao, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan sugin waqti dheer oo ku filan xadka fiiso imaanshaha la dalbado lana soo saaro. Tani dhib maahan marka safafku gaaban yihiin, laakiin waqtiyada mashquulka ah rakaabka aan horay u haysan fiisooyinka waa laga tagi karaa waana inay ku sii socdaan baska maxalliga ah ama tuk-tuk. Waxaa jira khiyaano caan ah oo ajaanib ah oo laga qaado illaa 100 Thai Baht oo ah safarka 2 daqiiqo, oo lagu daray 25 Thai baht ee buundada, iyo tuk-tuk ama tagaasida Vientiane. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tareen ku tag Udon Thani
Tareenada maalinlaha ah ayaa taga Nong Khai (45 daqiiqo oo kaliya iibsiga 11 Thai Baht) iyo buundada saaxiibtinimo ee ka gudubta Wabiga Mekong ilaa Laos. Tareenadu sidoo kale waa u soo noqnoqdaan Nakhon Ratchasima iyo Bangkok. Habeenku wuxuu muujiyaa hurdo inuu Bangkok waxaa loo qorsheeyay inay qaadato 9.25 saacadood, laakiin badiyaa waxay qaadataa waqti dheer. Si kastaba ha ahaatee, weli waa raaxo iyo raaxo, gaar ahaan marka lagu qaado sariirta jiifka ama qolka. Tareenka maalinlaha ah ee taga Bangkok wuxuu maraa waddo ka gudubta harada weyn ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee uu abuuray Pa Sak Jolasid Dam (ee Gobolka Lopburi). Xiriirinta Xarumaha waaweyn ee koonfurta Isaan (Buriram, Surin, Sisaket iyo Ubon Ratchathani) ayaa lagu sameyn karaa Nakhon Ratchasima kuwa jecel inay ku safraan tareen.
Isku soo wada duuboo, waxaa jira tareeno maalinle ah, iyo seddex maalinle oo tareenka habeenkii ah Bangkok ilaa Udon Thani iyo tan kale (badankood caadiyan waxay ka yimaadaan ama joojiyaan at Nong Khai), iyo dhowr tareenno maxalli ah oo taga meelo kale, oo ay ku jiraan Nakhon Ratchasima.
Xarunta Tareenka. Saldhigga tareenka ee Udon Thani waa mid ku habboon, oo u dhow aagga dalxiiska ugu weyn iyo xarunta dukaamaysiga ee Central Plaza.
Ku wareegida Udon Thani
Raadinta hareeraha Udon Thani waxaa fududeeyay saddex wareeg oo waaweyn oo ku yaal wadada dhexe, Wadada 2: wareegga saacadda, wareegga isha iyo Amiirka Prajak Circle. Sidoo kale waa macquul inaad naftaada u jiheysato Central Plaza ama Nong Prajak Park. Waxaa jira waddo la maro oo magaalada dhexdeeda lagu wareejiyo.
Saldhigga weyn ee basaska, oo u dhow Central Plaza wuxuu leeyahay joogsi taksi. Adeegga soojiidashada ciribtirka 'Grab ride-hailing' wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa Udon, in kasta oo qiimayaashu ka bilaabmayaan 60 Thai Baht xitaa safarka ugu gaaban, oo si dhakhso leh ayey u kordhaan ka dib.
Udon Thani wuxuu leeyahay samaale badan (taksi baaskiil saddex lugoodle ah), in kastoo sida meelo kale, ay si tartiib tartiib ah ugu dhiibayaan cadaadiska mashiinka gubashada gudaha.
Tuk-tuks, mootooyin saddex lugood leh, ayaa si fudud looga heli karaa goobaha ganacsiga badankood. Kala hadal qiimaha safarkaaga intaadan furin. Ogsoonow in Udon Thani gawaarida maxalliga ah (oo loo yaqaan Skylabs) ay kaga duwan yihiin kuwa badankood Thailand inta ka baxsan Isaan maaddaama aaggooda ay yihiin mootooyin loo habeeyay. Haddii aad u safarto Laos, waxaad sidoo kale halkaas ku arki doontaa gawaarida noocaas ah (oo loo yaqaan "jumbos") halkaas. Tuk-tuks waxay ku wareegaan waddooyinka iyagoo fiirinaya dalxiisayaasha. Marka laga reebo safarada dhaadheer qiimaha waa inuu ku dhowaad 30-50 Thai Baht. Haddii aad gasho xarunta basaska subaxa hore oo aad u baahato guri marti ah waxay iska dhigi karaan inaysan ku hadli karin Ingiriisiga, waxay kugu kaxeynayaan goob yar oo “raadinaysa” guryaha martida ka hor intaanay kaa soo dejin koonaha saldhigga; si kastaba ha noqotee, qaar ayaa laga yaabaa inaysan ku hadlin Ingiriisiga oo kaliya waxay isku dayayaan inay caawiyaan. Kadib waxay waydiisan doonaan 100 Thai baht safarka 30 Thai Baht. Waxaa jira hoy badan oo masaafada u jirta saldhiga.
Udon Thani waxay leedahay shabakad basaska u eg oo xamuul qaada oo lambar leh oo leh 2 kursi oo gadaal ah heestaha dambe; Qiimaha waa 8 ama 10 Thai baht safarkiiba (10 Thai Baht oo ka baxsan wadada giraanta).
Kireynta Baaskiilka. Baaskiilada ayaa kiro ahaan loogu heli karaa geeska waqooyi-bari ee Nong Prajak Park. 20 Thai Baht / saacad.
Baaskiiladaha sidoo kale waxaa maalin kasta laga kireysan karaa Aasiya Baasboorka iyo SPM House.
Baaskiil ama gaari
Kirada mootada ayaa si fudud looga heli karaa meelo badan oo ka tirsan Udon Thani sida Soi Samphanthamit. Waxa kale oo jira dukaamo badan oo aqbala duubista khadka tooska ah sida Udon Rent A Bike.
Haddii aad rabto inaad ku raacdo wax yar oo raaxo leh, waxaa lagugula talinayaa inaad kireysato gaari, kireysiga ugu wanaagsan ee aasaasiga ah ee deegaanka Udon Thani waa UD Car Rent. Waxa kale oo aad ka heli doontaa shirkadaha waaweyn ee kireeya baabuurta Caalamiga ah ee Udon Thani Airport.
Maxaa lagu arkaa Udon Thani
Dhul laga qoday Ban Chiang
Ban Chiang (Qiyaastii 35 km E ee Udon). Qodida qadiimiga ah oo ah liiska UNESCO ee Dhaxalka Dunida. Basaska iyo heesaha tuulooyinka labadaba waxay kugu dejin doonaan markaad joojiso Ban Chiang.
Ban Nakha (15 kiiloomitir woqooyi ee Udon oo ku taal Rte 2). Tuulo caan ku ah iibinta xariir gacmeed iyo dhar cudbi ah. Waa xoogaa ganacsi laakiin socod ka soo laabashada wadada ee tuulada ayaa geyn kara xoogaa xariir ah iyo gorgortan cudbi ah.
Nong Bua. Xadiiqad leh haro ku taal bariga khadka tareenka. Waxaa loo xushay baagaga Shiinaha ee harada iyo tiirka masduulaaga.
Phu Foi Lom Eco-Park (40 km SW ee Udon). Wadooyin badan iyo biyo-dhacyo xilli roobaadka. Koonfurta Udon waa dhul beereed ballaaran / haro weyn oo loo yaqaan Khumpahawapi. Bishii Oktoobar, tartamada doonta masduulaagii dhaqameed ayaa lagu qabtaa harada. Khumpahawapi dhexdeeda waxaa ku yaal baarkinka magaalada oo ay ku yaalliin daanyeero faro badan oo halkaas ku noolaa in ka badan boqol sano.
Xadiiqadda Qaranka ee Phu Phrabat (60 km NW ee Udon oo u dhow Ban Phue). Khad khad cajaa'ib leh oo leh dhismeyaal badan oo sandstone ah oo dhowr kun oo sano jiray. Rinjiyeynno dahaadh da 'age ayaa sidoo kale ku dhex yaal baarkinka.
Lake Lotus Cas (Talay Bua Daeng, ทะเล บัว แดง), Tambon Chiang Haeo, Degmada Kumphawapi. Doon raac raac harada ay ka buuxaan ubaxyo guduudan (runti waa ubaxyo biyo adag oo adag) harada Nong Han (หนองหาน). Ubaxu wuxuu bilaabmaa Oktoobar, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la daawado laga bilaabo Diseembar illaa Febraayo inta lagu jiro subaxnimada. Daawadeyaasha shimbiraha ayaa sidoo kale arki kara heron iyo shimbiraha kale. Doomaha iyo wadayaasha ayaa kiro ahaan loo heli karaa saacad kasta hareeraha harada, 300-500 Thai Baht. Waxaa la soo jeedinayaa in la joogo habeenkii waa Ma Der Bua Hotel oo ku teedsan harada. Waxay sidoo kale leeyihiin makhaayad waxayna leeyihiin musqul loogu talagalay shan Thai Baht. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Udon Sunshine Beerta Orchid. Caan ku ah orchids kala duwan, barafuunnada ka soo baxa orchid iyo dhirta "u dhaansiga muusikada" Sababtoo ah gaadiidka dadweynaha ee Udon Thani oo liita, macnaha keliya ee gaadiidka dalxiis ee ay ku tagayaan meelaha loo dalxiis tago ayaa ah kirooyinka Gawaarida ama adeegga Taksiga.
Daytrip ilaa Nong Khai. Qaado tareen daqiiqad ah 45 daqiiqadaha 08: 34 ama 11: 42 illaa Nong Khai oo loogu talagalay 11 Thai Baht. Ama tareenka ku celi 13:03 ama ku soo celi bas yar mini 50 Thai baht. 30 daqiiqo kasta oo laga raaco istaanka basaska. Haddii aad rabto inaad kireysato gaari oo aad u raaxo yar yara raaxeyso, waxaa jira hay'ado badan oo kirada baabuurta ah oo laga heli karo Udon Thani, sida UD Car Rent, Avis, Budget.
Shineemo weyn. Ka daawo filim Shineemo weyn oo ku taal Central Plaza. Filimada qaar Thai ama qaar Ingiriis ah sidaa darteed dooro muujinta habboon.
Nong Prajak Lake Park. Maalin kasta, 04: 00-20: 00. Aag madadaalo oo weyn oo magaalada gudaheeda ah iyo barta koowaad ee dadka deegaanka ku jimicsadaan kuna nastaan. Waxay ka kooban tahay haro / kayd ballaaran oo leh dhowr jasiirado yaryar, waxay leedahay aagag cawl wanaagsan leh iyo nashaadaadyo ay ka mid yihiin aerobics habeenki (muusikada muusikada Thai) iyo kalluunka jajabka roodhida ah. Kuwa firfircoon, waxay sidoo kale caan ku tahay orodka ama baaskiil wadista (kirada baaskiilka ee la heli karo). Laba wadiiqo oo laamiya ayaa wareega harada: midka gudaha ee baaskiillayda, kan kore ee kuwa lugta ah. Wareegga midka kore waa 3.3 km (2 mi). Inta badan wadada orodku hareeraha harada hareeraheeda waa taariikh la'aan, laakiin qayb ayaa laga xiray 20: 00-04: 00.
Jimicsigaaga Udon Thani, 322/19 Prachaksilpakom Road (Inta udhaxeysa Isbitaalka Bangkok iyo 7-Eleven, gadaasha dukaamada). Isniinta ilaa Jimcaha, 08: 00-24: 00; Sabtida ilaa Axadda, 12: 00-24: 00. Meel cusub (Janaayo 2020) oo ku taal Udon, mid ka mid ah oo keliya. Badhtamaha bartamaha Plaza iyo xarunta tareenka. Isku-duwaha qiyaas ahaan (la cusbooneysiiyay Mar 2016)
Wadada giraanta dhinaceeda bari waa Suuqa Dharka Bo Bei. Magaalada dhexdeeda lafteeda waxaa kuyaalla 7-Elevens iyo sidoo kale maratyo yaryar oo farabadan oo wata cuntooyin iyo alaabooyin Reer Galbeed ah.
Big C (SE ee Xarunta Magaalada ee Wadada Nittayo; SW ee Xarunta Magaalada ee Rte 210). Maalin kasta, 09: 00-24: 00. Laba goobood. Hypermart, raashinka, alaabta guriga, dharka.
Bartamaha Plaza (Hore Chareonsri), 277 / 1-3 Wadada Prajaksillapakom. Isniinta ilaa Jimcaha, 09: 30-21: 00. Sa, Su, Hols, 09: 00-21: 00. Xarunta Udon Thani ee ugu weyn ee laga dukaameysto, oo ka kooban shan dabaq oo laga dukaameysto, oo ay ku jiraan Asia Books, Bakhaarka weyn ee Robinson, Tops Supermarket, Sizzler steakhouse, KFC, Pizza Company, Swensen's Ice Cream, Boots farmashiyaha, alaabada IT, telefoonada gacanta, cineplex.
Landmark Plaza / TukCom. Dhismo dukaameysi leh shineemo SFC.
Macro (E ee Xarunta Magaalada). Maalin kasta, 06: 00-22: 00. Iibsashada jumlada jaban.
Suuqa Habeenkii (W ee xarunta tareenka, shan daqiiqo u jirta xarunta basaska laga raaco.). 17: 00-22: 30. Cun oo kaxee cuntada.
Naadiga Tesco (UD Town; mid kale oo ku yaal wadada giraanta, dhinaca N). Dukaan qiimo jaban ku fadhiya marka loo eego Tops Supermarket oo ku yaal Central Plaza. Dhowr goobood. Midda ugu dhexeysaa waxay ku taal UD Town (saacadaha: 07: 00-24: 00). Midka wadada giraanta woqooyi waa Tesco-Lotus Extra (saacadaha: 08: 00-23: 00).
Suuqa sare ee CentralPlaza, 277/3 Prachuksilpakom Wadada. Cunnooyinka reer galbeedka iyo Thai; bar salad; dir; rootida Isniinta ilaa Jimcaha 11: 00-21: 00; Sabti ilaa Axad 10: 00- 21:00. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Magaalada UD (Ku dhegan xarunta tareenka). Mall leh maxkamad cunto, dukaanka Tesco Lotus, saddex maqaaxiyo Oishi oo kala duwan, McDonald's, Swensen's Ice Cream, Pizza Company, WaWee Coffee iyo ganacsiyo tafaariiq badan leh.
Cuntada Xalaasha ah ee Udon Thani
Fadlan guji Makhaayadaha Xalaasha ee liistada makhaayadaha Xalaal ee Udon Thani.
Booska wada shaqeynta ee Udon Thani
Smarthub, 322/19 Prachaksilpakom Road (Near Central Plaza iyo xarunta tareenka, inta udhaxeysa Isbitaalka Bangkok iyo 7-Eleven, gadaasha dukaamada). Maalin kasta, 09: 00-21: 00. Goobaha shaqada, qolalka kulanka oo leh qalab maqal iyo muuqaal ah, Internet, koobiyeeye, fakis, shaqaalaha taageerada xafiiska. Qiimuhu waa qiyaas. 60 Thai Baht 1 saac, 180 Thai baht maalintii. (la cusbooneysiiyay Mar 2019)
Rugta ilkaha ee ku taal Udon Thani
Rugta Ilkaha ee Wattra, Sai Uthit Wadada (Dukaan casri ah oo ka soo horjeedda 7-Eleven Saldhiga baska 1 ee hoose, 100 m ka CentralPlaza), M-Sa, 09: 00-19: 30; Su, 09: 00-17: 00. Aqoonyahan, dhakhaatiirta ilkaha ee ku hadla Ingiriisiga ee ku shaqeeya teknoolojiyada casriga ah. 800 Thai Baht si dib loogu sifeeyo taajka molar. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Nong Khai waa magaalo aad u wacan oo webiga ku dhow una dhow xadka Laos. Buundada Saaxiibtinimada waxay ku taal halkan waana kan ugu weyn ee laga gudbo xadka Laos ee loo maro Vientiane. Dad badan oo safar ah waxay sii maraan Nong Khai markay ka baxayaan ama ka baxayaan Laos iyaga oo aan ogeyn in meeshani u tahay meel u qalanta safarkeeda xaqeeda.
Khon Kaen magaalo kale oo la mid ah khadka tareenka ee u socda koonfurta. Basasku had iyo jeer way baxaan waxayna qaataan 1,5 saacadood, tareenadu way sii dheereystaan.
Vientiane, oo ah caasimada Laos, waxay qiyaastii u jirtaa hal saac iyo badh magaalada Mekong. Basaska degdega ah ee degdega ah waxay ka baxaan saldhiga basaska ee Udon Central lix jeer maalintii iyagoo tagaya Vientiane. Baska hal wado waa 80 Thai Baht. Fiiso imaanshaha Laos ee Buundada Saaxiibtinimada waxay ku kacaysaa USD35 30 maalmood (laba sawir oo baasaboor ayaa loo baahan yahay ama waxaa jira lacag dheeraad ah oo ah USD1).
gudaha Udon Thani
Centara Hotel & Xarunta Shirarka Udon Thani
Calaamadeeyihii hore ee xiisaha lahaa แล้ว caweys wuxuu daba socdaa falka iyo shaygiisa (haddii uu jiro).
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Xalaal ee Thailand > Hagaha Socdaalka Udon Thani Xalaal